March 9, 2020 - Myitter
လန်ဘော်ဂနီ ကားတစ်စီးရဲ့ တန်ဘိုးက သိန်း၈သောင်းခွဲလောက်ရှိပါတယ် ….
လန်ဘော်ဂနီ ကားတစ်စီးရဲ့ တန်ဘိုးက သိန်း၈သောင်းခွဲလောက်ရှိပါတယ် ။ ထီ သိန်းတစ်သောင်းခွဲကို ၇ ကြိမ်ဆက်တိုက်ပေါက်မှ လန်ဘော်ဂနီကားကို ဝယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။᠌᠌᠌ ᠌᠌ လက်တလော ဖေ့ဘုတ်မှာ တန်းဖိုးကြီး အဝတ်အစားတွေနဲ့ ဘွဲ့တံဆိပ်ယူတဲ့ သူတွေကို ဝေဖန်သံတွေပါ။ အဝတ်အစား ရတနာတန်ဖိုးဟာ သိန်း သောင်းဂဏန်းဆိုတော့ သုဓမ္မသိင်္ဂီကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲကြီး […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် မြောက်ကိုရီးယားမှာ စစ်သား(၁၈၀) သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရ
ဗိုငျးရပျဈကူးစကျခံရတဲ့ နိုငျငံတှထေဲမှာ တဈနိုငျငံ အပါအဝငျဖွဈတဲ့ မွောကျကိုရီးယားမှာ အခု ထှကျရှိလာတဲ့ သတငျးတှရေ စဈသား (၁၈၀)အထိ ဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ သဆေုံးခဲ့ရပွီလို့ သိရပါတယျ။ ထောငျပေါငျးမြားစှာကို သီးခွားနရောတှမှော စောငျ့ရှောကျထားပါသတဲ့။ ဒီအတညျပွုမှုကို မွောကျကိုရီးယားစဈတပျအာဏာပိုငျတှကေ ထုတျပွနျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဗိုငျးရပျဈက ၎င်းငျးတို့စဈသားတှအေပျေါ သကျရောကျမှုဘယျလောကျရှိတယျဆိုတာကို ခေါငျးဆောငျတှထေံ တငျပွခဲရာ၊ အခုလို […]
ဂူ အပြင် ကို ခေတ္တထွက် လာပြီး မိုင်းဖုန်း ဆရာတော်ကြီး မိန့်မှာ တဲ့ကပ်ရောဂါဘေးကင်းဝေးယတြာ
ယ ခုအချိန်တရားကျင့်နေတဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးဟာ အစဉ်အေးမြလျက်ရှိတဲ့ ဂူအတွင်းမှာ မပူစဖူး ပူအိုက်လာတဲ့အတွက် ဂူအပြင်ကို ခေတ္တထွက်လာပြီး လူအမြောက်အများသေဆုံးလျက်ရှိတဲ့အတွက် ကပ်ရောဂါဘေးမှ ကင်းဝေးစေဖို့အတွက် နေအိမ်ဘုရားမှာသံပုရာသီး (၅)လုံး ဇီးသီး (၅) လုံး ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းထားကြရန် မိန့်မှာပြီး ဂူအတွင်းပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားကြောင်း ကျိုင်းတုံမှ မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှ သတင်းပေးပို့လာတဲ့အတွက် အရေးကြီးသည်လူတိုင်းအိမ်တိုင်းလုပ်ကြပါ April […]
မိခင်စိတ်ထားပြီး အမုန်းခံချစ်နေရလို့ ပူညံပူညံလုပ်တတ်တဲ့ ဇနီးကို တန်ဖိုးထားပါ ….
မိခင်စိတ်ထားပြီး အမုန်းခံချစ်နေရလို့ ပူညံပူညံလုပ်တတ်တဲ့ ဇနီးကို တန်ဖိုးထားပါ ပူညံပူညံလုပ်တတ်တဲ့ ဇနီးကို တန်ဖိုးထားပါ သူတို့ကမိခင်စိတ်ထားပြီး အမုန်းခံချစ်နေရလို့နှမျော တတ်တဲ့ ဇနီးကို တန်ဖိုးထားပါ သူကသင့်ရဲ့ နောင်ရေးအတွက်တွေးပြီး ထိန်းသိမ်း ပေးနေရလို့ ။ ဟင်းချက်ညံ့တဲ့ ဇနီးကို တန်ဖိုး ထားပါ အရသာရော့ပေမဲ့ အပြင်စာတွေထက်တော့ သင့်ကျမ်းမာရေး […]
ကသာ အကျဉ်းထောင် အတွင်း အကျဉ်းထောင် ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးဆီက မူးယစ်ဆေး ဖမ်းမိ ….
ကသာအကျဉ်းထောင် အတွင်း အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးဆီက မူးယစ်ဆေး ဖမ်းမိ ကဲဗျာ . . ဒီနေ့ နံနက်က ကသာအကျဉ်းထောင် အတွင်း အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးဆီက မူးယစ်ဆေး ဖမ်းမိတာ ပါတဲ့ဗျာ… ဒီလိုနိုင်ငံဝန်ထမ်း ပြည်သူ့လစာစားနေသူတွေကိုယ်တိုင်ကပါ ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ကင်းတာတွေလုပ် တရားမဝင်စီးပွားတွေရှာနေတော့ ပြည်သူတွေလုပ်တာသိပ်တော့မဆန်းတော့ပါဘူး။ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်နဲ့လည်းမညီ ဒီလိုဂန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်။ဟိုအထက်ကနေ အောက်ခြေထိ […]
ကသာ အကျဉ်းထောင်အတွင်း အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်း နှစ်ဦးဆီက မူးယစ်ဆေး ဖမ်းမိ …
ကပ်ကြီး သုံးပါး ကျော်လွှားနိုင်စေဖို့ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး၏ မိန့်မှာချက်များ
ကပ်ကြီး သုံးပါး ကျော်လွှားနိုင်စေဖို့ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး၏ မိန့်မှာချက်များ သင်္ဘောသီးတွေ ဓာတုပစ္စည်း မသုံးပဲအသားထူထူ၊ အစေ့နဲနဲ ပက်ပက်စက်စက် သီး‌အောင် စိုက်ပျိုးနည်း လက်တွေ့အသုံးချဆေးနည်းတို (ဆေးမြီးတို) များ အိမ်စာ လုပ်နေတဲ့ သမီးငယ်လေးကို သူကိုယ်တိုင် သတ်မိလို့ အရူးတစ်ပိုင်း ဖြစ်သွားတဲ့ မိခင်ရဲ့ အဖြစ် …. […]
ဟာသဗွီဒီယို တွေ ရိုက်နေတဲ့ မျိုးလှိုင်ဝင်း ဆိုင်ကယ်များ လိမ်ယူပြီး ထွက်ပြေးနေလို့ အမှုဖွင့်ထား ….
ဟာသဗွီဒီယိုတွေရိုက်နေတဲ့ မျိုးလှိုင်ဝင်း ဆိုင်ကယ်များလိမ်ယူပြီး ထွက်ပြေးနေလို့ အမှုဖွင့်ထား မျိုးလှိုင်ဝင်းက ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ်မရှင်းပဲ ရှောင်ပုန်းနေလို့ ဆိုင်ကယ် ကိစ္စအရောင်းဝယ်လုပ်တုန်းက ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်ဆီ သွားယူတဲ့အချိန် ကိုယ်ပါပါလို့ ပိုင်ရှင်က မျိုးလှိုင်ဝင်းနဲ့ရောပီး ကိုယ့်ပါအမှု့ဖွင့်ထားတယ် ၂ လပိုင်း ၂ ရက်နေ့ကစပီး ၂၁ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ ခွဲထိ […]